काठमाडौं-काठमाडौको कपनमा बस्ने सिन्धुली कमलामाई २ निबासी हरि कार्की र कल्पना कार्कीकी छोरी शर्मीला कार्की विवाह भएको दुई महिनामै सम्पर्क विहिन भएकी थिईन् । उनको सर्लाही लालबन्दी १० का सन्तोष खत्रीसं विवाह भएको थियो । विवाह गरेको दुई महिनामै श्रीमती बेपत्ता भएपछि सन्तोष पनि बेहाल बनेका थिए ।
श्रीमानले आफु श्रीमतीबीना बाच्न नसक्ने बताउदै उनले श्रीमतीलाई फर्किन बिलौना गरेका थिए । आमाले बलिन्द्रधारा आँशु पारेर भनिन् छोरी तिमीले जे चाहन्छौ त्यसरीनै राख्न चाहन्छौं । तिम्रो समस्या समाधान गर्छौं नानी जसरी भएपनि आइदेउ भन्दै गरेको दृश्य पनि क्यामेरामा कैद भएको थियो ।
ट्वाइलेट जान्छु भन्दै निस्केकी श्रीमती लामो समय सम्म नफर्किए पछि खोज्न निस्केका सन्तोषले अहिले भने आफ्नी श्रीमतीलाई भेटेका छन् । माइती पक्षका पनि छोरी हराएको खबर पाएपछि छोरी बसेको घरमा पुगेका थिए । तर खोजी गर्दा नभेटीएपछि उनीहरु निकै चिन्तित देखिन्थे ।
अघिल्लो दिन छोरीसंग लामो कुरा गरेकी आमा भोलीपल्टै छोरी हराएको खबरले विक्षिप्त बनेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि धेरैले लाइक शेयर गरि खोज्नको लागि सहयोग पुर्याएका थिए ।
* तनाव के हो? कसरी तनाव ब्यबस्थापन गर्ने ? (जानी राखौ)
आजभोलि मनिसहरुमा अत्याधिक तनावमा देखिन्छन् । यस्ता मानसिक तनावका थुप्रै कारणहरू छन्। हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो अवस्थालाई कसरी लिन्छौ। त्यो चिजसँग हाम्रो तनाव निर्धारित हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई एउटा घट्नाले तनाव दिन सक्छ भने अर्कोलाई नदिन सक्छ। जस्तै भूकम्पका कारण कति व्यक्तिलाई तनाव भयो कतिलाई भएन।
नेपालमा मानसिक समस्या भन्नसाथ हामीले एउटै कुरा बुझ्ने गर्छो पागलपन। जबसम्म व्यक्ति र समाज यो समस्याबाट उठ्न सक्दैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। बिरामी पनि पीडित भइरहन्छ र समाजले पनि कतै पीडाबोध गरेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मानसिक समस्या भनेको पागलपनको मात्रै समस्या होइन भनेर बुझ्नुपर्छ।
रसायनको गडबडीले गर्दा मानसिक समस्या हुन्छ। यसलाई सामान्य रुपमा लिन सक्नुपर्छ। मानसिक समस्या सामान्यदेखि डरलाग्दा खालका पनि हुन सक्छन्। डरलाग्दो मानसिक समस्या एक प्रतिशत, दुई प्रतिशत मात्रै होला। धेरै खालका मानसिक समस्याहरू घरमै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ।